Muxuu ka yiri Solskjær kaddib guushii taariikhiga ahayd oo ay Man United ka gaartay Leeds United?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Solskjær kaddib guushii taariikhiga ahayd oo ay Man United ka gaartay Leeds United??
Dajiye December 21, 2020
(Manchester) 21 Dis 2020. Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guushii weyneyd ee ay kooxdiisu ka gaartay Leeds United.
Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford guul weyn kaga gaartay kooxda Leeds United, kaddib markii ay kaga adkaatay 6-2, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Wareysi uu bixiyay Ole Gunnar Solskjær kaddib ciyaarta ayaa wuxuu ku sheegay:
“Waan ku faraxsanahay waxqabadka qof walba, ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan iskudayo inaan la jaanqaado jir ahaan, sababtoo ah kooxdan waxay kugu Imtixaaneysaa jir ahaan.”
“Way fiicnaan laheyd haddii ay halkaas joogi lahaayeen 75,000 oo taageerayaal ah.”
“Waan ognahay in kooxda Leeds ay leedahay qaab ciyaareed gaar ah, Marcelo Bielsa wuxuu leeyahay qaab u gaar ah, sidoo kale anigana waa sidaas, dhamaan tababarayaashu waxay isku dayayaan inay horumariyaan kooxahooda.”
“Xilli ciyaareedku wali wuu dheer yahay, waana inaan diiradda saarnaa nafteena, oo aan aragnaa waxa dhici doona.”
Si kastaba ha noqotee, Manchester United ayaa guushan ay ka gaartay kooxda Leeds United, waxay ka dhigtay inay soo fariisato booska saddexaad ee dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay uruursadeen 27 dhibcood.
Roy Keane oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan tartanka loogu jiro horyaalka Premier League-ga xilli ciyaareedkan
“Karim Benzema wuxuu ku jiraa heer kale.” – Zinedine Zidane